Maxaa ka soo baxay wada hadal dhexmaray Taalibaan iyo Mareykanka? – Bandhiga
Maxaa ka soo baxay wada hadal dhexmaray Taalibaan iyo Mareykanka?
Hoggaamiyeyaasha ururka Taaliban ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan kulamo ay la yeeshaan ergayga gaarka ah ee Maraykanka ee u qaabilsan Afghanistan, Zalmay Khalilzad sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters.
Reuters ayaa sheegtay in arrintan ay timid kadib kulan saacado dhex maray Zalmay Khalilzad iyo hoggaamiyeyaasha Taaliban magaaladda Qadar si looga wada hadlo dadaalo lagu damacsan yahay si xal loogu helo dagaalada Afghanistan.
Afhayeenka ururka Daalibaan Dabiixullah Mujaahid ayaa sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen sidii loo soo gabogabayn haysashasda Maraykanka ee Afhganistan iyo in xal nabadeed loo helo isdiidada ka jirta Afgaanistaan,sida laga soo xigtay ilo ka tirsan Daaliban.
Waxa lagu soo qaaday wadohadalkan qodobbo muhiim ah oo uu kamid yahay sidii looga saari lahaa ciidamada shisheeye dalka Afhganistan iyo sii-deynta xubno kamid ah dhaqdhaqaaqan ee la xiray, halka Maraykanku uu soo jeediyay samaynta guddi wada jira ah.
Madaxa xafiiska Taalibaanka ee magaaladda Dooxa, Sher-Cabbaas ayaa sheegay in wafdiga Taalibaan uu la yeeshay kulan gooni ah wafdi ka kooban 8 xubnood oo Maraykan ah, isaga oo ku tilmaamay mid hordhac ah, dhanka kale xubin sare oo ka tirsan ergayda Taaliban ayaa sheegay in ergayga Mareykanka uu ka codsaday 6 bilood oo xabbad joojin ah si ay u dhaqan gasho doorashooyinka ka hor.